Nnukwu nsogbu 2 afọ 4 ọnwa gara aga #969
Naanị ụgwọ ụgwọ ụgwọ akwụ ụgwọ obere akwụkwụ.ALL nke m FSX gbajiri. Enweghị redio na GPS .....
N’oge na-adịbeghị anya weghachitere ihe niile ... ọ nweghị ụzọ m ga-esi mee ya ọzọ. Yabụ, enwere ụzọ isi dozie ya, kedu ihe hel bụ? Kedu ihe na-eme ya?
Nnukwu nsogbu 2 afọ 4 ọnwa gara aga #970
Ọ bụ na ị hụghị ya n'anya, emeela m otu ihe ahụ ọtụtụ oge. Ihe mbu bu iwepu ngwanu a nwere ike ime ya. Ihe ozo bu ihichapu isi FSX cfg, ma bido ibido FSX, ọ ga-eji nke ọhụrụ dochie cfg, dị ka ọ dị mgbe mbụ nbudata FSX. Akụrụngwa gị niile ebudatara ga-anọrịrị .Ma ị ga-akwado ọkwa ahụ ọzọ.
Nnukwu nsogbu 2 afọ 4 ọnwa gara aga #984
Ekwesịrị m ịgbakwunye na otu n'ime usoro ihe ịkwụ ụgwọ ị gbakwunye nwere ike ibute nchekwa nchekwa n'ime FSX imebi emebi. Site na nkọwa gị, ọ ga-abụ na folda gauges. Ndị na-akwụ ụgwọ nwere otu ọ bụla, mebiri igwefoto oghere na GPS. Enwere m olile anya na ịkwesighi ịmalite ọzọ, mana ọ bụrụ n’ịme ya, m na etinye a eri maka ndị na-eme ya FSX ngalaba . Atụrụ m anya na ọ na-enyere aka
Nnukwu nsogbu 2 afọ 4 ọnwa gara aga #990
Ihe dị egwu, ha na-arụ ọrụ. Mgbe m na-ebu ọkwa ugbo elu ụfọdụ, ha abụọ apụla.
Mgbe m guzobere ụgbọ elu ahụ, nweta ikike nhichapụ ATC wdg .... ọ bụ azụ, ha abụọ. Damjọ ịma mma. Echere m na PMDG 747 kpatara ya. Wepu ya ugbu a ya mere m ji chee na ọ ga-adị mma.
Daalụ maka enyemaka na agbanyeghị.